Isaayyaasiifi Abiy badhaasa Noobeelii Nagaa booda yeroo duraaf wal argan - BBC News Afaan Oromoo
Isaayyaasiifi Abiy badhaasa Noobeelii Nagaa booda yeroo duraaf wal argan
25 Muddee 2019
Madda suuraa, Alamy
Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa hojiif Finfinnee yoo galan Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimadiif aanga'oota olaanoo biroon simatamaniiru.
''Jaalleekoo nagaa kan ta'an Pirezedaant Isaayyaas Afawarqiifi Jilli isaanii gara mana keessan lammaffaatti Anaa dhufu,'' jechuun MM Abiy miidiyaalee hawaasummaa fayyadaman irratti Pireezidant Isaayyasiin simachuu barreesaniiru.
Hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii erga haaromee Pireezidant Isaayyaas hojiif Itoophiyaa yoo xiqqaate si'a sadii ol dhufaniiru.
'Yoo ollaan nagayaan bule, nagaan bulani'
Hariiroo tolfachuun Itoophiyaafi Ertiraa maaliif akkas saffise?
Itoophiyaan Looreetii Noobelii Nagaaf 'simannaa gootaa' taasifte
Ministirri Muummee Abiy Ahimad biyyoota lamaan gidduu araarri akka bu'uufi naannoo Gaanfa Afrikaattis nageenyi akka mirkanaa'u hojii adda durummaan hojjeetaniif badhaasa Noobeelii Nagaa erga fudhatanii aanga'ootni lameen yeroo walargan ammoo kun isa jalqabaati.
Anaga'ootni lameen hariiroo Itoophiyaafi Eertiraa gara sadarkaa olaanatti ceesusuu haala danda'amurratti ni mariyatu jedhamee eegama.
MM Abiy Ahimad Noorwey magaala Ooslootti argamanii badhaasa Noobeelii badhaafaman yeroo fudhatan haasaa taasisaniin, yaada araaraa dhiyeessine Pireezidantt Isaayyasa osoo fudhachuu baatanii waliigalteen kun hin jiraatu turee jechuun, badhaasichi kan Pireezidant Isaayyasiifi kan lammiilee Ertiraas ta'uu dubbatan.
Jila aadaa hariiroo Itoophiyaafi Ertiraa cimsuf ergama fudhate
Wal arganii gammachuu badhaasa kanaa akka qooddataniis dubbatanii ture.
Badhaasa Noobelii: MM Abiy Ahimad badhaasa Noobeelii Nagaa fudhatan
Jilli aadaa Ertiraa deeme hangam ummata Itoophiyaa bakka bu'e?
Badhaasa Noobeelii: Itoophiyaan MM Abiy Ahimad 'simannaa gootaan' simatte
12 Muddee 2019
'Federaaliizimiin amma jiru akka itti fufu feena' - Paartii Ummata Affaar
Ijaarsi siidaa Jeneraal Waaqoo Guutuu maalirra jira?
'Arrabsoon karaa miidiyaa hawaasummaa kiyyaa naaf ergamu mataa na dhoosuuf'
Biliyeneroota addunyaa kanaa gaa'elasaanii diigan
Dubartiin 'akka duutetti' nama sosobdeefi maallaqa hatte sababa sareesheetiin qabamte
Maaliitti dubartiin waggaa 25 al-takkaatti daa'imman sagal deesse